Femke Halsema na-eme ka ngosipụta na-enweghị ikike iwu & otu nzukọ na 1,5 m na-adọpụ uche mmekọrịta mmadụ na ibe ya: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 2 June 2020	• 18 Comments
isi mmalite foto: nrc.nl
O kwuru n’ezie, n’abalị ụnyaahụ mgbe ngosipụta a na-enweghị atụ doro anya n’elu Dam; Femke Halsema na Op1: ngosipụta ziri ezi bụ ikike dị n'iwu iwu. Yabụ na ịchọghị ikike mgbe niile. Ndị a bụ fig niile nke steeti ma anyị niile na-erubere nrube isi isi, n'ihi na ụlọ ọrụ mgbasa ozi amalitela anyị ikwere na nke a bụ ụzọ isi mee ya.
Ee e, ịchọghị ikike ngosipụta. Nke a bụ ikike dịrị n'iwu. N’ezie, ịkwesighi irube iwu ma ọ bụ iwu ọ bụla na-emebi iwu. Femke Halsema ụnyaahụ gosipụtara hoo haa na ọbụna ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị maara na ha kwesịrị irube isi n'iwu ahụ. Ma, ha na-eme naanị ma ọ bụrụ na ọ dabara na ha.
Y’oburu n’inwe ezigbo nke mmemme, ị ga-achọpụta n’onwe gị ikike gị bụ.
Ihe ngosi a ụnyaahụ n’ehihie ahụ dị na Amsterdam bụ n'ezie nke akwadoro. Ihe ngọpụ maka Femke Slis Halsema bụ asụsụ viper brood. N'ihi ya, ọnụ ya na-asụ asụsụ. Onye ọ bụla nke na-eche ntakịrị nwere ike chọpụtala na ngagharị iwe nke ụwa niile, gụnyere ndị nke ahụ n'Amsterdam ụnyaahụ, ka a kpara ọgụ (lee ebe a). Na isiokwu a Akọwaara m otú akụkọ George Floyd kwesịrị isi malite agha obodo. Nke ahụ bụ akụkụ nke edemede ukwu ahụ akọwapụtara m n'akwụkwọ akwụkwọ Nọvemba 2019. Gụọ akwụkwọ ahụ ka i wee nweta ihe omuma banyere ya.
Ọ dị mkpa ịghọta ka usoro mgbasa ozi, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụkụ buru ibu nke ndị bi na (Inoffzieller Mitarbeiter, dị ka n'okpuru Stasi Germany na GDR mbụ) niile na-arụ ọrụ n'okpuru otu okpu a. Eduziziri ya na mmachi jupụtara puku ndị nwoke 5000. Anyị na-ahụ ọgba aghara ọkachamara nke ọgba aghara na-agbada n'ofe West. Ọ bụrụ na ijikọta ọgba aghara ahụ na ntiwapụ nke abụọ nke ọrịa Bill coates na-abịanụ, ị nwere ike iwepụ ogwe aka dị ike iji dozie ihe. Site na ihe ngosi ọkachamara na (n'oge na-adịghị anya) mgbakwunye nke ndị ọgba aghara ọkachamara, ị nwere ike itinye ọkụ ahụ n'ụzọ a na-achịkwa.
Usoro ntụgharị nke Femke Halsema bara uru ka ị lerukwuo anya, n'ihi na ụdị ụdị aghụghọ nke ndị ọrụ ụgha nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eduhie gị ihu.
Ka o doo anya na ya na-akparị mkparị site na olu ya mgbe ọ na-ekwu n'oge mgbasa ozi nke Op1 na enweghị ihe ngosi na-egosi na ìgwè mmadụ ahụ nọ na dam ga-aba ụba. Anyị nwere nnakọta data buru ibu maka nke ahụ. Akwukwo AI akpaghị aka maara onye na-eleta nke otu Facebook ma nwee ike tụọ nke ọma ma mara ihe onye ọ bụla na ndị otu chọrọ ime, na-enweghị ịbanye na 1 Facebook ma ọ bụ Twitter otu. Ha maara kpọmkwem mmadụ ole ga-abịa Dam Square. Atụmatụ Femke na nke a nwere ike inye aka na ịmebe iwu na - elele data ndị anya na - elekọta mmadụ site na steeti (nnukwu data).
N'okwu niile, ihe ọ bụla steeti na-eme, ka ọ dị n'ogo gọọmentị ma ọ bụ nke mba ma ọ dị ihe dị ka otu mita na ọkara ma ọ bụ otu; ihe niile megidere iwu ahụ. Yabụ ebe Femke kwupụtara n'ụzọ doro anya na ya ekwesịghị ịjụ ikike (lee vidiyo dị n'okpuru), n'ihi na ọ bụ ikike dị n'iwu, nke a metụtara ihe ọ bụla amanyela gị n'oge nsogbu Corona (na ọtụtụ oge tupu).
Iwu nke okpueze, nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị mgbasa ozi rere, na-akwatu olu ndị mmadụ site na ngosipụta nke ochichi onye kwuo uche ya. N'ezie, ọ bụ okpueze ahụ na-etinye mbinye aka. Niile site na amara nke Chineke.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu ọ bụla na-emebi ọ bụghị naanị nzuzo gị, mana karịa iwu niile. Tupu mgbe ahụ, imirikiti iwu na-emebi ikike gị na mmadụ niile.
N'ime afọ ndị ahụ, anyị nwere ọtụtụ ihe agwọ dị ka Halsema na ọtụtụ ndị ọzọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na anyị anaghị ahụ ya ọzọ. Mark Rutte, Hugo de Jonge na ụlọ ọrụ na-ere puppet nke ndị isi mara mma, na-ejide ọdịdị nke aka ekpe na aka nri, na-enwere onwe, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọbara ọbara ma ọ bụ odo odo; ochichi onye kwuo uche ugha.
Ndi ochichi onye kwuo uche ya buru ibu ma jiri aka gi zoo ije maili asaa. Nanị ụzọ ọ ga-esi pụọ bụ iwepụ ụtụ ndị a n'ike ikike ha na ịchịkwa onwe ha site na ochichi onye kwuo uche ya. Iji mee nke a, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịghọtahie ka emegburu gị n'ihi mmemme ị na-edina n'okirikiri gị, yana otu ị ga - esi kwere na ya naanị n'ihi na ndị niile gbara gị gburugburu emeela otu mmemme ahụ yana akụkụ nke sistemụ ahụ. Iji maa atụ, a na-arụ ọrụ sistemu ahụ site na ịdabere na 'Amaghị m ihe ọ bụla'.
Oge erugo maka oge ochichi onye kwuo uche ya nke anyị ga-eji kpochapụ usoro olulu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ochie ma nwalee ya n'ihu ọha. Oge eruola ka anyị họrọ ndị isi n’onwe anyị. Oge eruola ka anyị bulie iwu anyị n’onwe anyị. Oge eruola ka anyị mee ihe anyị. Direct onye kwuo uche ya na-eme ka nke ahụ kwe omume. Usoro ochichi onye kwuo uche ya bụ naanị ihe ga - eme ka ngwa ngwa kwụsị. Ya mere lelee anya www.fvvd.nl ma ọ bụ pịa bọtịnụ.
Ọ bụrụ na ịnọgidesi ike na ndọpụ mmekọrịta - otu mita na ọkara - mgbe ahụ nke a mere (onyunyo na-awụ akpata oyi)
Tags: otu na ọkara, Asmterdam, coronavirus, mmiri e gbochiri egbochi, igosipụta nri, igbanwe, agba, Femke, iwu, Halsema, mita, Na 1, -elekọta mmadụ
2 June 2020 na 15: 24
Lọ oriri na ọ openụ .ụ mepere
Pslọ a na-emeghe
Ihe niile mepere
Mita 1,5: lefuo nzuzu
Ihe niile megidere iwu, ndị megidere iwu na enweghị mmerụ
Aka dị ebe ahụ ị ga-adọ adọ!
Ọkpụkpụ dere, sị:
2 June 2020 na 17: 27
Were ego kwụọ ụgwọ ihe niile
2 June 2020 na 22: 47
Ministri zigara iwu mberede maka ịnakọta data telecom n'ụlọ ezumike
Ministri okwu akụ na ụba ewebatala iwu mberede nke na-enyere RIVM aka ilele data sitere n'ụlọ elu na-ebugharị otu afọ. Ezigara iwu ahụ ihe mberede na oflọ Ndị Nnọchiteanya taa, mgbe echichara nkatọ sitere n'aka Datalọ Ọrụ nchekwa data Dutch.
Iwu mberede ahụ na-eme ka Institutelọ Ọrụ Mba na Ahụike Ọha na nwetakwu ịnakọta data nnyefe site na ndị na-enye telecom. RIVM chọrọ iji data ahụ kọwaa nkesa coronavirus. Dabere na data ahụ, RIVM nwere ike ịgwa gọọmentị ma ọ bụ mpaghara nche ka imechi ma ọ bụ zuru ike usoro ahụike.
A na-ahapụ ihe niile n'okpuru usoro # Covid1984
3 June 2020 na 12: 42
mgbe ahụ ọ ga-abụrịrị izu ike.
2 June 2020 na 16: 00
Oge eruola maka ndị ọchụnta ego, ndị ọrụ ijikọ ma kpoo steeti n'otu n'otu maka ego efu. Wepu fuck !!
Onye isi ọhụụ nke German nke Leaks na-akọ na Denouncing Corona dị ka 'Mkpu Globalgha Ekeresimesi Zuru Ezo Ala'
Gọọmentị etiti gọọmentị na mgbasa ozi mgbasa ozi nke Germany na-achịkwa mmebi mgbe ha nwesịrị akụkọ na-agbagha akụkọ akụkọ Corona guzobere site na ozi ụlọ ọrụ.
Offọdụ n'ime amaokwu amaokwu ndị akụkọ bụ:
Ihe egwu Covid-19 karịrị akarị: ikekwe ọ dịtụghị ihe ọghọm nke nje virus ọhụrụ ahụ gafere karịa ọkwa nkịtị.
Ndi mmadu na anwu na Corona bu ndi nke n’agha agha n’azu n’aho a, n’ihi na ha abiawo na njedebe nke ndu ha na ahu ha esighi ike ha enweghizi ike idi nsogbu ojoo ubochi niile (tinyere ihe ruru otu nari na iri abuo bu ndi n’abia).
Gburugburu ụwa, n'ime otu ụzọ n'ụzọ anọ nke afọ, enwebeghị ọnwụ karịa 250,000 site na Covid-19, ma e jiri ya tụnyere ọnwụ nde mmadụ 1.5 [25,100 na Germany] n'oge oke mbufe 2017/18.
O doro anya na ihe ize ndụ ahụ karịrị nke ọtụtụ nje ndị ọzọ. O nweghi ihe akaebe na nke a karịrị mkpu ụgha.
Ntahie nwere ike ịdọrọ usoro ndị a: N'oge ọgba aghara Corona steeti gosipụtara onwe ya dịka otu n'ime nnukwu ndị na - emepụta akụkọ adịgboroja.
Benzo Wakker dere, sị:
2 June 2020 na 16: 32
A ga - eji ihe ngosi ahụ mee ihe banyere Dam ahụ ọzọ dị ka ihe kpatara 'ebili mmiri nke abụọ' iji gbochie mmadụ niile izu ole na ole laghachi.
2 June 2020 na 17: 38
3 June 2020 na 11: 54
Halsema, ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo aha ya, nwere Kabbalist na onye na-enyo enyo na mbụ Abramovich na akwụkwọ nta ya dere "Ike na Imtụgharị uche". Eleghi anya o siiri ndi Machiavelli ego. Ndị eze enweghị uwe, oge eruola mgbe ndị mmadụ ga-ezere ndị a na-arịa ọrịa ike.
Na agbanyeghị na ha niile bụ ndị ọchịagha, gụnyere nke a na-akpọ ụlọ eze.
3 June 2020 na 18: 33
Gọọmentị zuru ụwa ọnụ na-alụ ọgụ megide ndị nke ha ma na-egbuchapụ mgbukpọ agbụrụ ma ọ bụ obere karịa na ọnụ ọgụgụ nke onwe ha, otu gọọmentị ahụbeghịkwa mbụ n'etiti ndị bi na ha.
Mass nsogbu? uka ngwere? na kwa uka hypnosis?
Ihe omume Femke Halsema nwere ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ. Echere m na otu onye n’ime ha bụkwa okwu nnwale iji hụ n’ogbe ndị mmadụ hiwere ụra wee nabata nke a n’etetaghị. Ruo ugbu a nnukwu ihe ịga nke ọma maka Rutte na co.
4 June 2020 na 10: 13
4 June 2020 na 23: 13
Nkwụ ọzọ na igbe nke Covid1984 fiasco, ikpe maka ịkwụ ụgwọ mmebi buru ibu na-abawanye kwa ụbọchị. Na amụma Chris Lagarde na ECB, ọ bụ n'ezie ikuku ịkwụ ụgwọ maka nke a 😉 😉lọ ọrụ niile na - emebi ntụkwasị obi ngwa ngwa ..
Onye na-eme ihe nkiri porn, ihe nlele nke kọleji efu nke ọchịchị obodo na-adazi ụbọchị:
Surgisphere, nke ndị ọrụ ya pụtara ka ọ bụrụ onye edemede sci-fi na ụdị ọdịnaya okenye, nyere nchekwa data n'azụ ọmụmụ Lancet na New England Journal of Medicine hydroxychloroquine.
Lancet weputara nnukwu omumu banyere hydroxychloroquine
Healthtù Ahụ Ike Worldwa maliteghachi ikpe ikpe coronavirus na hydroxychloroquine ọgwụ ịba mgbe nyochachara nchegbu metụtara nchekwa
6 June 2020 na 13: 29
Iwu corona ohuru iji kpochapụ mgbagwoju anya banyere ihe
Mee ka ọ bụrụ iwu na ị ga - edebe otu mita na ọkara ma ọ bụ karịa. Ogo ahụ, nke ka bụ nwa oge, ga-adresị na iwu Corona nke Minista Ahụike Hugo de Jonge.
ha mere ya ọzọ, ị na - emezi ya ma zuru ndị Madurodam nnwere onwe ha ọzọ. O kwesịrị ihe nrite maka iji tinsel ọnụ ya
6 June 2020 na 15: 00
Ihe niile bụ n'iwu ndị m hụrụ n'anya ziri ezi, n'ihi na anyị na-emeso ndị iro a na-adịghị ahụ anya. "Ike na pụrụ ichetụ n'echiche" KUCH 😷 Achọrọ m ikwu karịa ..
Ndị ikike nchekwa data Dutch (AP) zigaara ndị otu ụlọ ọrụ nke ụlọ ahịa aka ochie iji dọọ aka na ntị megide iwu na-akwadoghị igwefoto maka nnabata ihu.
6 June 2020 na 17: 13
ọnweghị ihe na-eme na mberede na Madurodam ihe niile na-aga dịka edemede. A na-achụpụ ndị ọrụ ugbo ahụ n'ala ahụ, ohere ndị jupụtara na ha ejupụtawo n'Ebe Ndị Ọrụ data .. you chere na ụwa ọhụrụ ahụ Nwere Obi Ike?
xdenhaag dere, sị:
6 June 2020 na 18: 26
"- Obodo nke Amsterdam na - akwado ndị ngagharị iwe na mmachi -
Dị ka puku mmadụ ise gbakọtara na Dam Square na Mọnde. Ha kwugoro ebubo ebubo ịkpa oke agbụrụ na United States. Site na ngozi nke Mayor Femke Halsema. N’ezie, kansụl obodo ya na-enye ndị na-ahazi ya Mitchell Esajas na Jerry Afriyie nnukwu ego.
Ego ole ka ọ na-enweta?
7 June 2020 na 01: 02
Nke ahụ bụ ihe ọmụma na ihe ịdọpụ uche iji nye echiche na obere ntinye ego na-ewere ọnọdụ nke mere na anyị enweghị ike ị nweta na igwe mmadụ 5000 niile kwụrụ ma kwụrụ ebe ahụ
7 June 2020 na 14: 04
Nnupụchapu nke otu mpempe akwụkwọ ahụ, ihe niile bụ ebumnuche inwe ebumnuche nke ndị a na-enyochakarị. Ọ bụrụ na i kwe ka ndị nzuzu ole na ole bara uru na-aga n'okporo ụzọ na-akwụ ụgwọ, mgbe ahụ nke ahụ bụ ezigbo ego.
Now hụ ugbu a na a na-akpọ nchịkọta nkwado ego na ebumnuche ihu igwe, nnụnụ abụọ nwere otu okwute. Yabụ na nke a bụ Atụmatụ B maka ndị na-enyochakarị iji wee mee ya, nje chepụtara echepụta / ọdịbendị akụkọ ifo. Usoro niile eji achịkwa goyim.
7 June 2020 na 22: 40
N'ikwu okwu banyere goyim, mgbasa ozi nke Op1 na Satọde hapụghị ihe ọ bụla n'echiche, ozi dị ala banyere ụmụ anụmanụ na-efegharị n'isi gị. Igwe onyonyo na-asọ oyi, ka anyị kwuo onye nọ n'isi mgbasa ozi mgbasa ozi Dutch.
" Ọtụtụ puku ndị mmadụ nọ na Dam Square kwụrụ George Floyd ngagharị iwe ma ọ bụ oge ọ bụla maka onye ọ bụla amaghị?
Donald Trump na-akpọ ụbọ akwara mgbe Rome na-agba ọkụ, dị ka Emperor Nero »
Nleta ha: 4.194.488